Waxaa wax aad loola yaabo ah niman wata magac diimeed oo iyaga waxaan ka mid aheyn aqoonin laakin iyagu is yaqaanaan, iney manta idaacadaha la soo hor fariistaan waxaa heshiiyey Islaax iyo Damul jadiid .
Macnaheedu waa xukuumda noo xoojiya waa maahmaahdii Soomaalida ee Gaalaa god iigu jiree garuunka ii keena.
Waxaan la yaabayey rag wali mucaarad ku ah dowlada laakiin hadaan ogaadey nin walboo mucaarad ah inuu xaq iyo xaquuq leeyahey .
Waxaan talo u soo jeedinayaa dhamaan umadda Somaaliyeed iyo maamulada jira inay indhahooda furan arinkaana aan la dhayelsan Tusaale ahaan .
Islaax +Damul jadiid = Xukun Doon Hadii loo baahdo Ciidan Boliis ama Milltari Nabadsugid Asluub Safiiro Agaasimo guud.Waxey ku qeybsanaayaan:4.5 oo macneheedu yahey fikirka islaax iyo damul jadiid dad aamin san laakin kala qabiil ah in laguu keeno oo sawirka aad arkeysid noqdo dad Soomaali kala qabiil ah laakin hoos kawada xiriira oo hal urur oo heshiiyey ah.Taas macnaheedu waan in fadhiga laga kacaa oo lala xisaabtamaa ama lagu dacweeyo beesha caalamka ama leyska celiyo. Sababtoo ah waxey ku heshiin qodobadan .
Dr. Maxamud sheeq Saciid oo aqrinaayo qodobada lagu heshiiyey waxuu yiri
03- In la magacaabo gudiyo farsamo oo ka shaqeeyo dhameystirka arimahaas
04- Waxaa shacabka soomaaliyeed la ogeysiinayaa in la ilaaliyo Midnimada dalkana laga saaro xaalada adag uu ku jiro
Ilaahey baan idin ku dhaarshey arinkaan ka warama maxey ku kala duwan yihiin kuwii ka horeyey oo magaca diimeed watey.
Waxay Fikradaan u gaar tahay qoraaga hoos ku saxiixan.